အဆိုပါ Lego Batman ရုပ်ရှင် Minifigure Vignette: Friends မိသားစုအဲဖရက်
02 / 02 / 2018 02 / 02 / 2018 နစ်ခ် 1384 Views စာ0မှတ်ချက် 71020 အဆိုပါ Lego Batman ရုပ်ရှင်စီးရီး 2, အဲဖရက်, Batman, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego Batman, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသေးစား, သေးသေးလေး, အဆိုပါ Lego Batman Movie,, TLBMvig2
စုဆောင်းထားသောအသေးစား 71020 အဆိုပါ Lego Batman Movie Series2သည်ရုပ်ရှင်၏ရောင်စုံစာလုံးများကိုပိုမိုရှင်သန်စေပြီး vignette တည်ဆောက်မှုအသစ်တစ်ခုအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
The အပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ကုန်ကိုကြည့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ Lego Batman ရုပ်ရှင်ကဒီဇိုင်းသမားတွေကဒီစီမံကိန်းမှာပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ 71020 အဆိုပါ Lego Batman ရုပ်ရှင်စီးရီး2ပြန်ဆောင်ပုဒ်ဆောင်တတ်၏ စုဆောင်းထားသောအသေးစား ဇာတ်ကောင်များနှင့်ဝတ်စုံများကိုပိုမိုတိုးချဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
'' ငါတို့ ROOOOOOOOCK! '
အသစ်တစ်ခုအတွက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပြန်စစ်ဆေးပါ အဆိုပါ Lego Batman ရုပ်ရှင်စီးရီး2vignette.
Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား 71020 အဆိုပါ Lego Batman Movie Series2မျက်မမြင်အိတ်များကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Catwoman
Lego BrickHeadz 40271 အီစတာ Bunny ဖော်ပြခဲ့တယ် →
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်သည် Nick ဖြစ်ပါက Minifignick ဟုလည်းလူသိများပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Lego နှင့် ပတ်သက်၍ အရာအားလုံးနှင့်အရာအားလုံးကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်ကလေးဘဝကတည်းကအာကာသအခင်းအကျင်းကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ အသက် ၁၁ နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သလောက်“ ကြီးပြင်းလာသောအရာများ” ကိုရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းများကိုရောင်းလိုက်သည်။ သတိရ ဒါကထို့နောက် st ဖြစ်ခဲ့သည်art ကျွန်ုပ်၏ ၅ နှစ်အရွယ်သားနှင့် Legoland သို့အလည်အပတ်ရောက်သည့်အထိကြာခဲ့သည့်ငါ၏“ အမှောင်ခေတ်” ၏အကြောင်း။ ၉ နှစ်အကြာမှာငါဟာအုတ်ကိုကြိုက်နေတုန်းပဲ။ အလယ်ခေတ်ကပွဲခန်းမတွေကနေ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေအထိ။